Ike nke mgbanwe na-amalite site na ịtụ egwu, usoro mmemme na nkọwa ụgha wee gbanwee bụrụ ezigbo mgbanwe: Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 26 Ka 2020	• 5 Comments
isi mmalite: sohf.nl
N'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya, a gbara ọkara ụwa egwu na-atụ egwu nke onye iro coronavirus a na-adịghị ahụ anya. Otutu enweghi echiche ka usoro mgbasa ozi na ndoro-ndoro ochichi, na mmekorita ike nke ike (nke guzoro kemgbe oge ncheta), na-ekpebi nghota nke uwa anyi. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile anyị na-ahụ ma kwere na-acha nwere agba dị ka mkpokọta Trumanshow, ebe elu nke pyramid ahụ na-ekpebi nghọta.
Akụkụ dị oke mkpa nke ndị mmadụ na-enweta site na otu pyramid ike, mana nwogharia ya dịka nke zoro n'etiti bourgeoisie.
Ọ bụrụ na ịchọrọ eziokwu na ududo ududo, eriri ahụ na-ama jijiji na ududo maara na ị nọ na weebụ. Ọ bụrụ na ị na-eme mkpọtụ ike, ududo ga-agba ọsọ ime ka ị nwe ike. Anyị nọ na webụsaịtị ụwa (www) zuru ụwa ọnụ ma anyị ga-echetarịrị na otu ụzọ aga-esi zoo bụ igbochi anyị ịbanye na ya. Mana ozigbo anyị nọrọ na web, ọ dị mkpa ka ịzere itinye ihe. Iji nku gi eme ihe na oge ma na-adọrisị onwe gị bụ naanị ihe ga-agwọta ya.
Nke ahụ bụ foto niile mara mma, mana omume adịghị njọ. Ọ dị mkpa na anyị ga-amalite site n’ịchọpụta na anyị anọworị na web mmemme n’oge ndụ anyị niile; eziokwu adịgboroja nke wedatala anyị ma tinye anyị n'ọnọdụ ịdabere.
Ọ bụrụ n’anyị n’iru inyocha web iji hụ ma anyị nwere ike ijide udide n’ịgha ụgha, anyị na-echezọ na eriri niile na-ese site na ududo.
My Akwụkwọ Nọvemba 2019 na-enye nchịkọta nke otu esi ejikwa Trumanshow ahụ. Dazọ rada niile dị na nkeji ọrụ nke ike nwere naanị mpaghara mpaghara radar nke ha. Ha enweghị ike ma ọ bụ achọghị ịhụ nnukwu ihe osise ahụ. Mgbe ụfọdụ, nke ahụ 'achọghị ịhụ', n'ihi na ọ na-abịa na ụgwọ ego ma ọ bụ ọrụ. Ego na ugwu bu ihe mere otutu ji mechie anya ha (ma oburu na ha ahutala ihe bu nnukwu ihe). Ọtụtụ mgbe, ọ 'enweghị ike ịhụ' n'ihi na mmadụ niile agaala ụdị mmemme a.
Anyị ekwerela n'okike dị ka 'ihe ọmụma bụ ike', anyị ekwerela na ọ bụrụ na anyị na-eso nkuzi ahụ ma gbasie mbọ ike, anyị na-enweta ọtụtụ ihe, mana n'ikpeazụ onye ọ bụla na-ama jijiji na eriri nke ududo ma anyị na-enyere web aka. na-eto eto.
Ọ na-ewe nnukwu mgbanwe nsụhọ ga efe site na weebụ. Nke ahụ ga - amalite site na ịmalite mmụọ gị mbụ. Ka anyị ghara iweghachite okwu "nsụhọ" na "ịchọ eziokwu na weebụ," n'ihi na ị ga-elekwasị anya na weebụ ahụ. Nkọwapụta kachasị mma maka mmụọ bụ ya mere okwu a bụ 'mmụọ'.
N’akwụkwọ m a kọwara m na mmụọ anyị (mmụọ anyị) mara ihe dị na nje a. Ndu anyi bu ndi n’eme ya mbụ uwa, na nke enwere ike iji mmụọ nke ọ bụla tụnyere sel azuokokoosisi nke nwere ozi dị mkpa nke mkpụrụ ndụ ọ bụla nwere ike ịpụta, mana otu na - eme ka mkpụrụ ndụ stem etolite ogwe aka ma ọ bụ ụkwụ na nke ọzọ na-emeghe n'ime sel anụ ahụ. Gị na gị bụ, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ndị na - akwado ndị kere ụwa mbụ.
N’akwụkwọ ahụ ahụ, m bukwara amụma banyere ọrịa na-efe efe dị ka nke anyị na-enwe ugbu a. Enwere m ike ibu amụma ahụ n'ihi na achọpụtara m na ihe dị ugbu a (ụgha) na-eme kpọmkwem dị ka nje. Nje virus dị ka a pụrụ isi kwuo ya, bụ isi ọrụ nke sistemụ ikike. Ihe omume a na –eme ihe a n’ebube site na piramidi ya bu ihe n’enweghi ntinye nke nkpuru azumahia site na sel di ndu. Nje virus enweghị ike ibi n'enweghị onye ọbịa. Ọchọrọ ozi stem izizi nke mkpụrụ ndụ izizi ('mmụọ' mbụ).
Yabụ, enwere otu ụzọ webụ web na nke ahụ bụ 'icho mma' ma kwusi sistemụ nje. Nke ahụ na-amalite site na ịchọpụta na ị dị ike karịa nkịta na sistemụ nje. Mgbe ịchọpụtacha ahụ ị ga - enwetaghachi okwukwe; nkwenye na mmụọ gị na-ebu ozi azuokokoosisi iji wulite nguzogide na iwepu nje.
Nke ahụ na-amalite site na nkwenye na ike nke gị kama nkwenye na mmemme a na-amanye gị ime kemgbe ị bụ nwata (site na ndị na-eme onwe ha mmemme). Ọ na-amalite obere yana nsonaazụ ya dị ka ọ na-apụtachaghị na mbụ. Na mberede, ọtụtụ ndị gbara gị gburugburu na-eteta, mpaghara nwere ike na-arụ ọrụ dịka ọ dịbeghị mbụ.
Ndị okike nke ụwa mbụ wee teta ma rụọ ọrụ ikike okike ha - ọbụlagodi na mbụ o yiri obere na adịghị ahụ anya - mmata na-etolite ma nje virus ahụ na-efunahụ ike ya n'ikpeazụ. Ya mere, bido taa ma rụọ ọrụ ezigbo ike gị. Iwuli ihe mgbochi megide sistemu ahụ ka anyị wee nwee ike ịkọ nkọ sistemụ. Anyị ga-eme ya n'ụzọ dị iche; anyị ga-akọ nkọ ya. Rụ ọrụ sistem ahụ gị na gị bụ!
Kedu ihe kpatara ọtụtụ ndị gbara gị gburugburu ji kpuo ìsì?
Gịnị kpatara Martin Vrijland ji na-ekwu maka ụgbụ nchekwa dịka Robert Jensen, David Icke?
Ugbu a na anyị maara ihe nsogbu ahụ bụ, gịnị bụ ngwọta?
"Mkpụrụ obi a tụgharịrị atụgharị," "nzụlite azuzu," ọ dị adị?
Tags: mmata, coronavirus, agba, dịghịzi usoro, pyramid ike, edemede, spirit, Mahadum, virus, sistemu nje, teta, web, zielen
26 May 2020 na 13: 08
Ya mere ozi a bụ: agbachala ụkwụ gị, kama chọpụta na ị nwere nku wee fefu webụsaịtị.
27 May 2020 na 09: 22
Nke ahụ bụ ka m ga - esi nụ ya, site na ụbọchị 1 Enweghị m nchegbu ọ bụla.
Ọ bụghị otu mgbe ị sachara aka m, bọtịnụ niile nke igwe na-emetụ aka, ihe niile banuns wdg.
Ihe na - esite ... maa ihe, obi na-ada m mba ikpe gbasara m, a na-elekwa m anya dị ka nke ruru unyi.
Ọzọkwa ahụmịhe mara mma.
Enwere otu nwoke nwere uche na ahịa ahịa deka, anyị chọpụtara ozugbo na anyị nwere nkekọ, anyị amakọrọ onwe anyị na ndenye ọpụpụ, opekata mpe atọ! ma ọ bụrụ na ndị guzo n'akụkụ nwere ngwá agha anyị bụ
gbajiri, zombies ndị ahụ niile. Anyị jiri ihu ọchị mụmụọ ọnụ ọchị ma hapụ ndị mmadụ ka ha mebiri ha. Sodemieter njedebe nke nje virus gị bụ ọdịdị anyị.
Nke ahụ doro anya !!
Nke a, enwere Martin ikike a?
27 May 2020 na 13: 36
Mpempe obi gị. Klaasị.
29 May 2020 na 23: 33
Ndị mgbasa ozi (de Krant) na-ekwu na a na-eme nnọkọ nzuzu
Agbanyeghị, oriri na nkwenye adịghị, asụsụ nke ihe bụkarị
na-abawanye ụba, n'akụkụ nke a ka a na-akpọ
ndi odeakuko? ndị na-egosipụta akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-ezighi ezi.
Sneakness bụ nha abụghị ụzọ ọzọ, ka nke ahụ doo anya!
30 May 2020 na 22: 37
America tụpụrụ George Floyd ihu n'oge ngosi
" iPhone na-ezochi ngwa covid-19 kachasị ọhụrụ nwelite i-OS 13.5
Corona Nsogbu Covid-19 bụ ihe echetara afọ 2003 MS Blaster virus nke ana - akpọ Bill Gates »
Nleta ha: 4.169.824